Buhari oo dib ugu laabtay London si uu dawo u helo - BBC News Somali
Buhari oo dib ugu laabtay London si uu dawo u helo
8 Maajo 2017
Image caption Madaxweyne Buhari iyo ku xigeenkiisa
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa daaweyn caafimaad oo hor leh u jooga magaalada London iyadoo aan wali la shaacinin xanuunka haya.
Farriin kooban oo xafiiska madaxweynaha ka timid ayaa lagu sheegay in wax laga walwalaa aysan jirin.
Buhari, oo 74 sano jir ah, ayaa talada dalka uga sii tegay ku xigeenkiisa Yemi Osinbajo, si la mid ah sidii uu sameeyay markii uu London aaday bishii January, halkaas oo uu toddobo isbuuc u joogay fasax caafimaad.
Mr Osinbajo ayaa xilligaas aad loogu ammaanay siduu u gutay sii hayaha xilka madaxtinimada.
Wixii ugu dambeeyay ee uu qabtay madaxweynaha ka hor inta uusan u ambabixin London ayaa ahayd inuu la kulmay 82 ka tirsan gabdho iskuulley ah oo sanadkii 2014 la afduubtay, oo ay dhawaan kooxda Boko xaraam soo daayeen.
Gabdhahan ayaa la soo daayay Sabtidii aan soo dhaafnay iyadoo looga beddeshay 5 nin oo looga shakisnaa inay Boko Xaraam ka tirsanaayeen kaddib wada xaajood kooxda lala galay.
Gabdhahan ayaa ka mid ahaa koox gabdho ah oo gaaraya 276 oo laga afduubtay iskuulkooda oo ku yaalla waqooyi-bari Nigeria. Waxaa weli la l`yahay 113 ka tirsan gabdhaha.
Buhari: Weligay sidan oo kale uma xanuunsan
Madaxweynaha buka ee Nigeria oo shalay la arkay isagoo salaadii Jimcaha dadka la tukanaya
Nigeria: Buhari oo doonayo in loo kordhiyo fasax caafimaad
Dadka Nigeria ayaa aad uga walaacsan caafimaadka madaxweynahooda.
Markii uu Mr Buhari ka soo laabtay London bishii Maarso, wuxuu sheegay inuusan weligii sidaa u xanuunsan markii la daweynayay, waxaana looga digay in laga yaabo inuu u baahdo baaritaanno caafimaad oo dheeri ah.
Walaac ku aadan caafimaadkiisa ayaa soo ifbaxay kaddib markii uu ka baaqday saddex kulan oo golaha wasiirradu yeesheen. Waxaa xigay in urrurrada bulshada rayidka ah ay ugu baaqaan madaxweynaha inuu ku laabto London si daawyen dheeraad ah uu u helo.
Ka soo muuqashadiisii salaadda Jimcaha toddobaadkii hore ayaa ahayd markii ugu horreysay ee bulshada dhexdeeda lagu arko muddo labo toddobaad ah.
Caasha Buhari oo ah xaaska madaxweynaha ayaa iyadana sheegtay in madaxweynuhu uusan u xanuusansaneyn sida ay dadku moodayaan.